आज सोमबारे व्रत बस्नुभएको छ? थाहा पाउनुहोस् फाइदा – Khabar Silo
काठमाडौं मानिसका आआफ्नै इच्छा हुन्छन् । कोही दैनिक नयाँ नयाँ परिकार खाने अनि कोही भोकै व्रत बस्ने । धार्मिक तथा वैज्ञानिक दुवै कारणबाट हप्तामा एक दिन बस्ने व्रत स्वास्थ्यका लागि राम्रो मानिन्छ ।धर्मशास्त्र अनुसार व्रत शारिरीक स्वास्थ्यको दृष्टि महत्वपूर्ण छँदैछ, बार अनुसारको लाभ पनि फरकफरक रहने विश्वास गरिन्छ । सोमबार व्रत बस्दा के फाइदा हुन्छ ? धर्मशास्त्रमा के भनिएको छ ? तपाईंलाई चासो हुन सक्छ । सोमबारको व्रत बस्दा शिव र पार्वतीको पुजा तथा आराधना गरिन्छ ।
धर्मशास्त्र अनुसार, सोमबारको व्रत फलदायी मानिन्छ । सोमबारको व्रतले मानिसका हरेक इच्छा, आकंक्षा पुरा गर्दछ अनि ज्ञान प्राप्ति हुन्छ भन्ने मान्यता रहि आएको छ । विशेष गरी अविवाहित स्त्रीले असल तथा इमान्दार श्रीमान् पाउँछन् भन्ने मान्यता छ ।
चिकित्सकहरुले पनि हप्तामा एक दिन खाना नखाई ‘फास्टिङ’ बस्दा स्वास्थ्यलाई राम्रो गर्ने बताउँछन् । तर, बिरामी व्यक्तिले भने, चिकित्सकको राय अनुसार खानपानमा ध्यान दिनु जरुरी छ।
आज श्री शाके १९४२ बि.स.२०७७ साल चैत्र २६ गते बिहिबार इश्वी सन २०२१ अप्रिल ८ तारीख चैत्र कृष्णपक्ष द्वादशी तिथी शतभिषा नक्षत्र शुभ योग कौलव करण चन्द्रमा कुम्भ राशिमा आनन्दादि योगमा वज्र योग प्रमादीनाम संवत्सर सुर्य उत्तरायण बसन्त ऋतु वैष्णवहरुको पापमोचनी एकादशीव्रत देवपतनमा दशोद्वार पूजा (ज्यो.प.सरोज घिमिरे) मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, […]
Posted on November 23, 2020 Author khabar silo
आज श्री शाके १९४२ बि.स.२०७७ साल मंसिर ९ गते मंगलबार इश्वी सन २०२० नोभेम्वर २४ तारीख कार्तिक शुक्लपक्ष दशमी तिथीे पूर्वभाद्रपदा नक्षत्र हर्षण योग तैतिल करण चन्द्रमां कुम्भ राशिमा ११ः५९ बजे सम्म पश्चात मिन राशिमा आनन्दादि योगमा काण योग प्रमादीनाम संवत्सर सुर्य दक्षिणायन हेमन्त ऋतु बलम्वु महालक्ष्मीयात्रा, धादिङ्ग फूलखर्क गङ्गा जमुनामेला (ज्यो.प.सरोज घिमिरे) मेष राशि […]
मेष(चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) व्यापार व्यावसायमा मन्दि आउँनेछ । पढाई लेखाईमा मन जाने हुनाले नतिजा आफ्नै पक्षमा पार्न सकिनेछ । राजनिति तथा समाजसेवामा जनताको गतिलो समर्थन रहने हुदा पद प्राप्तीको योग रहेकेछ । आफन्त तथा सहयोगीको साथ पाईने हुनाले कामहरु गर्न जोस जागर बढ्नेछ । माया प्रेममा नजिक हुने समय रहेकोछ । तरपनि बाहिरी वाताबरणको प्रभावले स्वास्थ्यमा समस्या […]
तीन दिनको मौसम पूर्वानुमान – पूर्व र मध्यमा चट्याङसहित भारी वर्षाको सम्भावना
मेरो फिल्मको दृश्य हेरेर श्रीमान निक रोएः प्रियंका चोपडा